China Nkeji ato na-ahụ ka azụmahịa mba ofesi na-agbasa ndị nrụpụta na ndị na-eweta ngwaahịa. Mmiri mmiri
Nke atọ nke atọ na-ahụ ka azụmahịa mba ọzọ na-abawanye
Azụmaahịa mba ofesi China gbasaa na nkeji nke atọ na ọkwa dị elu, na-eme ka ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu kwa afọ na mbupụ na mbubata si na adịghị mma gaa mma, dị ka data ndị ahịa si kwuo.
Ọnụ ọgụgụ mbupụ isi na dollar wee rịa elu na 9.9 pasent afọ na afọ na Septemba site na 9.5 pasent na August, na-egosipụta ọnwa nke isii nke mbupụ ọnụ ọgụgụ dị elu karịa amụma ahịa.
Mbubata, ka ọ dị ugbu a, jiri 13.2 pasent rịa elu site na afọ gara aga, na-agbanwe mgbanwe pasent 2.1 kwa afọ na August, karịa atụmanya ahịa ma na-ebelata isi ahia ahịa na US $ 37 ijeri na Septemba site na US $ 58.9 ijeri na August.
Ihe isi ike nke China na mbupu bu ihe mbu site na onodu ya dika onodu aku na uba mbu na nke mbu n’ime oria ojoo nke COVID-19, nke nyere aka na nbapu nke PPE (ngwa nchedo onwe onye) na oru / omumu ihe site na ulo , mgbe ndị na-asọmpi ka nọ na nsogbu ahụ, dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na Nomura si kwuo.
"Ọganihu mbupụ nke China nwere ike ịdị elu maka ọnwa ole na ole ọzọ n'ihi ebili mmiri na-agagharị na COVID-19 na mba ofesi," ka Lu Ting kwuru, onye isi ala na China nke Nomura. "N'aka nke ọzọ, mmụba n'ọnwa Septemba na uto mbubata nke ọtụtụ ngwa ahịa na-egosi oke mkpa ụlọ na ụfọdụ mweghachi."
Goldman Sachs na-atụkwa anya ike mbupụ iji nọgide na ọnwa ndị na-abịanụ yana mbubata ahụ nwekwara ike ịga n'ihu ịgbasa na azụ nke mgbake na-arụ ọrụ ụlọ.
N'ime ụzọ atọ mbụ nke 2020, azụmahịa mba ofesi gbasaa site na 0.7 pasent n'afọ na afọ na ngụkọta 23.12 trillion yuan (US $ 3.43 trillion), na mbupụ na-agbakwunye ihe ruru trillion 12.71, mmụba nke 1.8 pasent site na afọ gara aga, ebe mbubata Gbanyere 0.6 percent na 10.41 yuan, General Administration nke Customs kwuru na Tuesday.
Li Kuiwen, onye nduzi nke ngalaba onu ogugu nke omenala siri kwuo, "N'ihu oke nsogbu nke oria ojoo nke COVID-19, China emeela ka nzaghachi iwu ya di omimi, gbasie ike iji kwado nguzosi ike na uzo isii na nchekwa na mpaghara isii."
Li kwuru, "Anyị emeela nnukwu ihe na mkpochapu na njikwa nke ọrịa a na mmepe akụ na ụba na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na nsonaazụ nke atumatu na ịkwado azụmaahịa mba ofesi gara n'ihu ịpụta, na mbubata na mbupụ mbubata nke ọma karịa ka a tụrụ anya ya."
Mgbe ha nwesịrị ujo ahụ na nkeji nke mbụ, mbubata na mbupụ weghaara n'ụzọ dị ukwuu n'oge Eprel-June n'agbanyeghị na ha ka na-etinye ntakịrị ntakịrị afọ-afọ.
Na nkeji nke atọ, mbubata na mbubata ahia nke China gbakwunyere puku ijeri 8.88, na-eto pasent 7.5 kwa afọ, n'etiti mbupụ ahịa rịrị elu pasent 10.2 na yuan 5 trillion 5 na mbubata butere pasent 4.3 na pesenti 3.88 trillion. Onu ogugu ato a bu ihe di elu na nkeji iri.
Njikọ nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ onye ọlụlụ kachasị ukwuu na China na mpaghara atọ mbụ.
Azụmaahịa mba ofesi China na ASEAN ruru puku ijeri ijeri 3.38, mmụba nke pasent 7.7, na-echekwa pasentị 14.6 nke ahịa mba ofesi China n'ime ọnwa itoolu mbụ.
Azụmahịa na European Union gbakwunyere ihe ruru ijeri trillion 3.23, ihe ruru pesenti 2.9, na-eme ka EU China nke abụọ na-azụ ahịa. Azụmahịa China na United States laghachitere site na mbibi mbụ, na uru ọ na-arị elu 2 pasent na yuan trillion 2,82 na oge ahụ.
Azụmahịa na mba tinyere Belt na Road, ka ọ dị ugbu a, toro pesenti 1.5 rue ngụkọta yuan 6.75
Omenala ahụ gosipụtara ngwa ngwa azụmaahịa mba ofesi nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Na ụzọ atọ ụzọ atọ nke afọ, ha nyere ngụkọta nke yuan trillion 10.66 na mbupụ na mbubata nke China, ihe ruru pasent 10.2 kwa afọ, na-echekwa pasent 46.1 nke ngụkọta azụmahịa mba ọzọ nke bụ pasent 4 dị elu karịa otu oge n'afọ gara aga.
N'ime ngụkọta a, ụlọ ọrụ nkeonwe zigara mbupụ nke yuan 7.02 trillion yuan, mmụba dị elu nke 10 pasent, na-echekwa pasent 55.2 nke ngụkọta ọnụ ahịa nke mbupụ China, ebe mbubata rịrị elu site na 10.5 pasent ruo 3.64 trillion yuan, na-atụle 35 pasent nke isi na-ebubata.
N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ tinyere ego nyere ụtụ mbubata na mbupụ nke yuan trillion 8.91, na-akpata pasent 38.5. Mbubata na mbupụ nke ndị nwe obodo ruru ijeri yuan 3.46 iji nweta pasent 15 nke ngụkọta.
Egosiputara atumatu uzo ahia a, ya na oke ahia ahia na mba ndi ozo na-ebuwanye ibu, Li kwuru.
N'ime ọnwa itoolu mbụ, azụmaahịa mba China niile rịrị elu na pasent 2.1 rue yuan 8.55, nke na-akpata pasent 60.2 na mbubata na mbupụ nke pasent 0.8 dị elu karịa n'otu oge n'afọ gara aga.
N'ihe banyere ụlọ ọrụ, mbupụ nke ihe mgbochi ọrịa, laptọọpụ na ngwa ụlọ rụrụ nke ọma, n'ihi mgbanwe ndụ nke ọrịa a butere.
"Mwepụta nke ngwaahịa ndị eji eji elektrọnik na ngwa ahịa maka ngwa ọrụ site n'ụlọ na-eme ka mbubata na usoro ngwaahịa," ka Betty Wang, bụ onye ọka akụ na ụba China na Australia na New Zealand Banking Group kwuru.
Nomura si Lu ekwere na-achọ laptọọpụ nwere ike ịnọgide na-adịgide adịgide maka ọnwa ole na ole, "dịka ọ bụ otu n'ime akụkụ dị mkpa nke akụrụngwa dị mkpa maka mmụta n'ịntanetị, n'agbanyeghị na ike ya nwere ike ịda mbà dị ka mkpa ụlọ akwụkwọ na-achọ."
Ọzọkwa, rịba ama, mbupụ nke ọgwụ na ahịhịa ọgwụ rịrị pasent 21.8, ebe nke ọgwụ na akụrụngwa rịrị 48.2 pasent.